घट्दैछन् अमेरिकामा कोरोना संक्रमित र मृतक - Nepal Readers
घट्दैछन् अमेरिकामा कोरोना संक्रमित र मृतक
This photo taken on February 20, 2020 shows doctors looking atalung CT image atahospital in Yunmeng county, Xiaogan city, in China's central Hubei province. - China on February 21 toutedabig drop in new cases of the coronavirus asasign it has contained the epidemic, but fears grew abroad after two former passengers ofaquarantined cruise ship died in Japan andacluster of infections increased in South Korea. (Photo by STR / AFP) / China OUT
संयुक्त राज्य अमेरिकामा कोरोना भाइरसको संक्रमणमा केही कमी आएको छ । देशभर फैलिएको कोरोना महामारीबाट आक्रान्त बनिरहेको अमेरिकामा केही दिनयतादेखि भाइरसको संक्रमण निरन्तर घट्दै गइरहेको पछिल्लो तथ्यांकले देखाएको छ । त्यसैगरी, मृतकको संख्यामासमेत कमी आइरहेको छ ।
अमेरिकामा कोभिड –१९ सम्बन्धि अफिसियल डाटा अपडेट गर्दै आइरहेको न्युजब्रेकका अनुसार कोरोना संक्रमणका कारण विश्वको सवैभन्दा धेरै प्रभावित मुलुक अमेरिकामा मृतकको संख्या घटेर आज करिब चार सयको हाराहारीमा झरेको छ भने गएको २४ घण्टाको अवधिमा ३३ हजार सात सय ६४ व्यक्ति कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन् ।
विगतका दिनहरूमा अमेरिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक ७७ हजारसम्म पुगेकोमा हाल त्यो संख्या आधाआधीमा झरेको छ । त्यस्तै, अघिल्ला महिनाहरुमा कोरोनाबाट अमेरिकामा दैनिक रूपमा करिब साढे चार हजारको हराहारीमा मानिसहरुको मृत्यु भएको थियो ।
यसैगरी। केही दिनयता नयाँ संक्रमित तथा मृतकको संख्यामा कमी आउनथालेपछि अमेरिकाको जनजीवन केही सहज देखिएको छ भने व्यापार–व्यावसाय तथा कार्यालयहरूले आफ्नो सेवा पुनःसञ्चालन गर्न थालेका छन् ।
गत फागुनमा पहिलोपटक कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएयता हालसम्म अमेरिकामा झण्डै ६१ लाख ५० हजार मानिस संक्रमित भएका छन् । यस अवधिमा एक लाख ८६ हजारभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ । मृतकको संख्यामध्ये ५० वर्षमाथिको उमेर समूह अधिक छ भने ३० वर्षभन्दा कम उमेरका मानिस नगन्य मात्रमा रहेको प्राप्त तथ्यांकले औंल्याएको छ । हालसम्म २३ लाख २५ हजार अमेरिकाबासी कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भइसकेका छन् ।
अमेरिकामा आइतबार करिब ४८ हजार व्यक्तिमा कोरोनाकोे संक्रमण भेटिएको थयो भने अघिल्लो दिनको संक्रमित संख्यासमेत सोही सेरोफेरोमा रहेको थियो ।
साथै, आइतबार मात्रै १२ सय बढीको ज्यान गएको अमेरिकामा शनिबार एक हजार ३९ जनाको मृत्यु भएको स्थानीय संचारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । अघिल्ला साताहरूमा मृत्युदर स्थिर देखिएता पनि नयाँ संक्रमितहरूको संख्या अत्याधिक मात्रामा थपिँदा सर्वसाधारण निकै त्रसित थिए । तर, पछिल्लोसमय संक्रमित संख्यामा कमी आएसँगै केही राहत महसुस गर्न थालिएको छ भने बजारमा मानिसहरूको चहलपहल समेत बढेको छ ।
तथ्यांकअनुसार कोरोनाको संक्रमण फैलिएका अमेरिकाका ५० वटै राज्यमध्ये सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति खेप्नुपरिरहेको न्युयोर्कमा अहिले संक्रमित तथा मृतकको संख्या करिब शून्यमा झरेको छ । यहाँ अहिलेसम्म करिब ३३ हजार मानिसको मृत्यु भएको छ भने झण्डै साढे ४ लाख मानिस संक्रमित भएका छन् ।
१६ जना नेपालीले ज्यान गुमाए
कोरोनाको संक्रमणका कारण अहिलेसम्म अमेरिकामा १६ जना नेपालीको ज्यान गइसकेको छ भने सयौंको संख्यामा संक्रमित रहेको यहाँका विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
यता, क्यालिफोर्नियामा समेत कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढेर करिब १३ हजार पुगेको छ भने झण्डै सात लाखभन्दा बढी मानिसमा संक्रमण देखिएको छ । क्यालिफोर्नियामा कोरोना संक्रमितको संख्या सबैभन्दा बढी छ । कोरोनाको संक्रमणबाट अहिलेसम्म विश्वभर झण्डै साढे आठ लाख मानिसको मृत्यु भएको छ भने संक्रमितको संख्यासमेत दुई करोड ५० लाख नाघेको छ । नेपाली नेटवर्क